HomeChampions LeagueMessi duni kale ayuu ka yimid, laakiin Suarez iyo Neymar cabsiyi nagama hayso – Nasri
Samir Nasri ayaa ku tilmaamay xidiga Barcelona ee Lionel Messi :Mid Duni ama meere Kale ka yimid” laakiin ku adkaystay in Manchester City haysato ciyaaryahano la tayo ah laacibiinta Neymar iyo Luis Suarez sida Sergio Aguero.
City ayaa ku qaabilaysa kooxda tababare Luis Enrique garoonkeeda Etihad Stadium ciyaar is araga koobaad ee hoyaalka Champions League wareegiisa 16 ka ah Salaasada, isla markaana damacsan inay ka aargudato guuldaradii 4-1 ka ahayd ee ay Sanadkii hore Barca baday.
Barca ayaa wakhti xaadirkan qani ka ah ciyaaryahanada weerarka ah hadana sidaas oo ay tahay waxaa Camp Nou ku garaacday Malaga Sabtidii, waxaanu Nasri ku adkaystay in Messi oo kali ahi ka heer sareeyo ciyaaryahanada City.
Isagoo warbaahinta la hadlaya wuxuu yidhi: “Messi iyo [Cristiano] Ronaldo waxay ka ciyaaraan meere ama duni kale oo gaar ah. Laakiin inta kale sida, Suarez iyo Neymar, Waxay la heer yihiin ciyaaryahanadayada ay kamid yihiin Sergio [Aguero]. Wax cabsi ahna naguma hayaan.”
Mar uu ka hadlayay guuldaradii ay naadiga reer Catalan kala kulmeen sanadkii hore, waxaa ka mid ahaa hadaladiisi: “Waxay ila tahay in ciyaartaasi ahayd mid markii horeba nala sii weynayd. Barca waxaanu u haynay qadarin xad dhaaf ah sanadkii tagay. Sanadkani wuu ka duwan yahay. Waxaanu ka war haynaa heerka aanu marayno.
“Waxaanu doonaynaa inaanu garaacno Barcelona maxaa yeelay waxaanu rabnaa inaanu tartanka ka gaadhno meesha ugu saraysa. Maaha inaanu ka aargudanayno. Laakiin waxaanu ka tayo iyo tamarba badanahay sidii aanu sanadkii hore ahayn, Wax kastaa waa ka gedisan yihiin sidii ay ahaayeen sanadkii hore. Naadi ahaan ayaanu u qadarinaynaa laakiin cabsi naga haysaa ma jirto.”
Watch Arsenal 3-3 Liverpool – All Goals & Highlights
Eden Hazard Oo Ku Guuleystay Abaal-marinta Xidiga Sanadka ee Qorayaasha Kubada Cagta
AC Milan 2-2 Benevento – All Goals & Highlights